Geometric dị jụụ Atụmatụ Echiche Echere Nye Gị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ụdị Geometric dị jụụ Tattoos Echiche Echiche Maka gị
Egwu egbugbere ọnụ abụwo ihe eji eme ihe n'oge ochie nke ejiworo na-anọchite anya ọtụtụ ihe karịsịa ma a bịa n'ihe banyere iconography.
Ogbugbu #geometric pụtara ihe kariri i nwere ike iche. Ọ nwere ihe pụrụ iche nke dịka ihe mgbakwasị ụkwụ. Ihe okwu a na-aga n'ihu bụ nke na-aga n'ihu. Ụdị ahụ nwere ọtụtụ ihe metụtara mgbakọ na mwepụ na ọ bụ mgbe niile egbu egbu nke ọtụtụ ndị na-eji na-anọchite anya nkenke, nguzozi na ịdịgide. Ọ na-ekwukwa banyere ịkọwapụta maka ụzọ e si kee ya.
Geometric #tattoo pụtara nwere ike ịpụta ụba na eme. Ihe nile banyere ihe geometric na-enye aka n'inwe afọ ojuju na obi ụtọ, nakwa ụzọ e si etinye ya na-eme ka ọ bụrụ otu ụdị egbu egbu. Isi ihe na-eme ka ọtụtụ ndị nwee obi ụtọ nwere ike ịmịpụta egbugbu. Ogbugbu nke Geometric aghọwo uzo ahu nke jiri otutu ihe na-achota ihe ha nwetara na ndu.
Mgbe ị nwere ụdị ntụgharị ahụ kpọmkwem nke uche gị n'uche, ekwela ka ụgwọ ya kwụsị gị ịbanye.
Ụdị Geometric azụ
Ọnụ igbu egbu dị ka nke a nwere ike ịkụda ọtụtụ ndị mmadụ ịghara ịga ya ma ọ bụrụ na ọ bụ ọkachamara.
Ụdị Geometric Ụdị
Ụzọ kachasị mma maka ịnweta ezigbo igbu egbugbu bụ mgbe ị na-ewepụta oge gị iji chọpụta ihe ị chọrọ.
Ụdị Geometric Leg
Ịzụ ahịa anaghịzi etinye uche n'ihe onwunwe. Ị nwere ike ịzụta ụdị igbu egbu ịchọrọ inwe.
Ụdị Geometric Dị Mkpa
Ahịa igbu egbu amaliteghị taa. N'ụbọchị ndị a, anyị na-ahụ ọtụtụ narị ndị na-ese ihe na-eme egbu egbu n'ụzọ dị otú a nke na ị gaghị enwe ike ịjụ ma ha esi emepụta ụdị nkà a.
Ụkwụ Geometric akpaaka
Ndị na-emepụta nka nwere ọtụtụ atumatu ego ha na-ewetara ndị ahịa ha. Ha bụ ụfọdụ ndị na-egwu egwu nke na-akwụ ụgwọ mgbe ụfọdụ dị oké ọnụ.
Nhọrọ ịchọta onye ọrụ ọkachamara na-ahapụ gị ịhọrọ. I kwesiri iji ego tụnyere ego ma leba anya na nkata tupu gi egbu egbu.
Kedu ihe ị chere banyere egbu egbu a dị egwu? Ụgwọ nke ime ya nwere ike iju gị anya.
Ụdị Geometric anụ dị oke mma
Ikwesighi imebi ihe kacha mma maka ego. Ndị mmadụ ga - ahụ ọrụ gị na ahụ gị ma ọ bụrụ na emejọrọ ya, ị nwere ike ịnọ n'oké nsogbu. E nwere ndị na-enye ndị ahịa nnukwu ego. Ego ndị a bụ ihe ị kwesịrị ile anya.
Ụdị Geometric Chest
Ọnụ ọgụgụ dị nro maka tattoos dị ka nke a nwere ike ịhọrọ ọnụego awa. Ogologo oge elekere nwere ike bụrụ ịzụ ahịa dị oké ọnụ ahịa maka gị nke bụ ihe kpatara ọtụtụ ndị na-ahụ maka ejiji na-ahụ maka igbu egbu maka ọnụego.
Ụdị Geometric Aka
A ga-egbu egbu a n'otu nnọkọ. Ego ole ị ga-akwụ ụgwọ bụ ihe ị ga-enwe mmasị mgbe ị na-aga maka otu. Ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa iji nyochaa dị iche iche maka nkà gị.
Ụdị Geometric Side
Ị ga-enwe nkwurịta okwu ihu na ihu gị na ndị na-ese ihe n'ihu gị ịnakwere ihe ịgwa gị. Imata onye na-ese ihe gị tupu ị gaa igbu egbu dị ezigbo mkpa. Usoro a ga - enyere gị aka izere nsogbu ma meekwa nhọrọ ziri ezi.
Geometry dị nsọ n'ihi ozi ọ nwere na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ama mmiri, ọdịdị, nautilus, nchịkọta na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọrụ nkà nwere ihe jikọrọ uche anyị. isi iyi
Ọdịdị na njikọ ya nwere maka ngwugwu mgbakọ na mwepụ nwere ike ịbụ adreesị naanị site n'iji egbu egbu. isi iyi
Eji egbugbere anụ dị ọcha
N'agbanyeghị otú egbu a pụrụ isi gbasaa, ọ dị mma mgbe niile n'anya. Ọ bụ nanị uche na ihe ịchọ mma na-egwu egwuregwu mara mma. isi iyi
Ụdị Geometric Ejiri
Ihe ndị na-edozi anya aghọwo otu n'ime ihe ọtụtụ mmadụ na-achọ ugbu a iji gosipụta obi ha. A na-eme ọtụtụ ọrụ dị mgbagwoju anya na ncha. A pụrụ iji egbugbu kọọ akụkọ na anyị nwere ike agaghị enwe ike ịgwa onwe anyị. isi iyi
Eji egbugbu amalite ọtụtụ afọ ọbụna mgbe mgbanwe ahụ adịghị mfe dị ka nke a. E nwere oge igbu egbu na-egbu mgbu. N'ụbọchị ndị a, anyị ahụla ka ndị na-egbu egbu ma ọ bụ ndị na-egbu egbu egbugbu egbugbu. isi iyi
Ọkpụkpụ Geometric Na Ọkpụkpụ Mmadụ
A na-eji egbugbere ọnụ geometry mee ihe dị ka ihe nnọchianya nke olileanya, ndụ ọhụrụ, udo na Iso Ụzọ Kraịst. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ejikọta ya na ikike ndị karịrị ike mmadụ ma ọ bụ ọbụna òtù nzuzo. isi iyi
Akpụkpọ anụ Geometric Tattoos
A ka nwere ndị mmadụ na-ewere ya dị ka ihe ịrịba ama nke ịhụnanya ebighị ebi. isi iyi
Aka Aka Geometric Aka
Ị nwere ike iji egbugbere ọnụ geometry iji gosipụta nnwere onwe. I nwedịrị ike ịhụ ya dịka nsọpụrụ na ike agha. Ka a sịkwa ihe mere na egbu egbu aghọwo ihe na-ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Anyị ahụla ụdị nkume diamond dị iche iche n'ahụ ndị ikom na ndị inyom. isi iyi
Inye egbugbu dị ka nke a na-eme ka ọha na eze nwee mmetụta dị ike. Ị nwere ike ịhụ ọtụtụ narị tattoo designs ma mgbe ọ bụla ị hụrụ egbugbere ọnụ diamond, ị na-adọrọ mmasị ya mma. isi iyi
Ụdị Geometric Ụmụaka
A naghị ekpochapụ ụmụ nwanyị na egbu egbu a mara mma. A na-eji ogwu nke geometric mee ihe site n'aka ndị inyom. Ihe nke a pụtara bụ na di na nwunye nwere ike iji ya mee ka mmekọrịta ha sie ike. E nwere ụdị dị iche iche nke mpempe akwụkwọ geometric nke ndị inyom nwere ike iji. isi iyi
Pịa ebe a ka ịchọta atụmatụ Cheto Mkpụrụ Geometric
egbu egbu hennangwusi pusirip tattoosazụ azụUche obindị na-egbuke egbukeAnkle Tattoosaka akaima ima mmaakwara obizodiac akara akaraỤdị ekpomkpaagbụrụ ebonnụnụkoi ika tattoon'olu oluna-adọ aka mmaegbu egbu egbuegbu egbu mmiriakpị akpịechiche egbugbuọdụm ọdụmndị mmụọ ozidi na nwunyeokpueze okpuezeenyí egbu egbuaka mma akaNtuba ntughariakara ntụpọegbu egbuọnwa tattoosegbugbu egbugbuegbu egbu osisi lotusụkwụ akaegbugbu maka ụmụ agbọghọudara okooko osisina-egbu egbuegbu egbu ebighi ebiegbu egbu okpuEgwu ugoegbu egbu maka ụmụ nwokearịlịka arịlịkaGeometric Tattoosmehndi imeweenyi kacha mma enyiaka akaegwu egwumma tattoosegbu egbu diamondụmụnne mgbu